Musharax Jebiye oo $10 000 ugu deeqay mashaariicda hormarineed ee degmada Xarfo
Musharaxa xafiiska Madaxweynaha Puntland doorashada 2019 Maxamuud Khaliif Xassan iyo wefdi uu hoggaaminaayo ayaa si mug iyo maqaam sare leh luugu soo dhaweeyey degmada Xarfo ee gobolka Mudug. Dadweynaha ku dhaqan degmada Xarfo oo aan u kala harin ayaa isugu soo baxay dariiqyada magaalada Xarfo, halka qaar badan ay uga hortageen Musharax Jebiye meel ka baxsan magaalada.
Musharax Jebiye ayaa kulan si wanaagsan loo soo agaasimey la qaatey bulshada Xarfo waxaana uu ka cudurdaartey in markii hore ee magaalada uu maray ay ahayd xili hore oo arooryo taasina keentey in ay degdeg ugu baxaan Bacaadweyn oo ay ku lahaayeen quraac, laakiin muhimadda ay leedahay darteed uu magaalada mar kale dib ugu soo noqdey si uu u dhegaysto baahida bulshadu u qabto isbeddel ka dhaca Puntland.
Maxamuud Khaliif Xassan Musharaxa Madaxweynaha Puntland ayaa markii uu dhegaytey bulshada iyo taageerada ay u hayaan in Puntland isbeddel wanaagsan ka dhaco, waxa uu ballan qaadey in $10 000 oo dollarka Maraykanka ah ku bixinaayo mashaariicda hormarineed ee degmada Xarfo gobolka Musug, taas oo waxgaradka iyo bulshadu si weyn u so dhaweeyeen.
Musharax Jebiye ayaa booqasho ku marey magaalooyinka Jalam, Burtinle, Bacaadweyn, Cagaaran, Gaalkacyo, Xarfo iyo qaar kale, waxaana lagu wadaa maalmaha soo socda in uu booqasho ku tago Gobolada Bari iyo Sanaag.